Zimbabwe Opposition Faction Charges Police Shut Down Harare Rally
The faction of Zimbabwe's opposition Movement for Democratic Change faction led by Morgan Tsvangirai said Monday it would lodge a complaint against police for obliging its organizers and members to end a Harare political rally after just two hours.
Tsvangirai faction officials said Chief Superintendent Thomsen Jangara, the officer in command of the Harare South police district, was present at the rally in Kambuzuma and ordered its termination before scheduled speakers could take the podium.
The ruling ZANU-PF party and opposition MDC have stepped up campaigning in the approach to local, general and presidential elections set for early 2008.
The MDC last week filed suit against Jangara and two other two officers, along with Police Commissioner Augustine Chihuri and Home Affairs Minister Kembo Mohadi, for allegedly disrupting its rally at Zimbabwe Grounds in Highfield in February.
Tsvangirai faction Harare Province spokesman and member of parliament for Kambuzuma Willas Madzimure told Studio 7 reporter Jonga Kandemiiri of VOA's Studio 7 for Zimbabwe that a complaint would be lodged with higher authorities.
Spokesman Andrew Phiri of the Zimbabwe Republic Police said he had no information on the alleged termination of the rally. He declined to provide a number for Jangara.